Kooxda Barcelona oo bisha Janaayo dib ugu laabanaysa doonista Dani Olmo – Gool FM
Kooxda Barcelona oo bisha Janaayo dib ugu laabanaysa doonista Dani Olmo
Haaruun September 2, 2021
(Barcelona) 02 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay suuqa bisha Janaayo dib ugu laabanayso doonista Dani Olmo.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa warinaya in Kooxda Barcelona ay qorsheynayso inay suuqa bisha Janaayo dib ugu soo laabto doon-doonista xiddiga Naadiga RB Leipzig ee Dani Olmo.
23-sano jirkaan kaasoo xirfaddiisa ciyaareed ka soo bilaabay akadeemiga Barca ee La Masia ayay kooxda reer Spain ka gudbisay maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xiddigaha dalab ku kacayay 50 milayn oo euro oo u dhiganta 43 milyan oo gini ama 59 milyan oo dollar.
Kooxda RB Leipzig ayaa hoos u dhigtay dalabkaas oo iska soo diiday, laakiin Barcelona ayaa qorsheynaysa inay markale isku daydo doonista Olmo marka sanadka cusub dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Miyuu Lionel Messi qorsheynayaa inuu Carruurtiisa ku daro da’yarta Kooxda PSG?
RASMI: Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha Agoosto ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey.. (Man Utd & Chelsea oo xiddigo ku leh)